Esona sikwere sikhulu eSpain: Ukusuka eOriente ukuya kwiFórum | Uhambo lweNdaba
ULuis Martinez | 12/05/2022 15:00 | España, Izikhokelo
Xa kuziwa ekuthetheni ngayo izikwere ezinkulu eSpain, isilingo sethu sokuqala yayikukuyenza sisuka kwiindawo ezininzi eziphambili ezihlala ilizwe lethu. Nangona kunjalo, siya kuba senza impazamo kuba ayingomkhulu.
Enyanisweni, iSpeyin inakho izikwere eziphambili ezimangalisayo egcwele izikhumbuzo kunye nembali. Zonke zintle kakhulu, nangona kufuneka sikuqaqambise engenakuthelekiswa Salamanca okanye hayi ngaphantsi entle ye Madrid. Ngokukwanjalo, sinokukuxelela ngabanye abathobekileyo ngakumbi, kodwa abaxabiseke ngokulinganayo, njengabo IChinchon Amaza ka Almagro. Nangona kunjalo, sifuna ukuthetha nawe malunga nezikwere ezikhulu eSpain kwaye akukho nanye kwezi eya kuba phakathi kwazo. Ngabo abo siza kukubonisa.
1 IForam Square (eBarcelona)
2 IColon Square (eMadrid)
3 Isikwere saseSpain (eMadrid)
4 Isikwere saseSpain (eBarcelona)
5 IPlaza de Oriente (iMadrid), ingaphezulu kweyona ndawo inkulu eSpain
6 IPlaza yaseSpain (Seville)
7 Usodolophu wePlaza waseMedina del Campo
IForam Square (eBarcelona)
IForum Square, eBarcelona
Mhlawumbi akufuneki sibandakanyile le ndawo kawonke-wonke kukhenketho lwethu, kuba ikwabizwa njalo Ipaki yeQonga. Akunjalo ngamabona-ndenzile, kuba imalunga ne-160 square metres kwaye idibanisa iBarcelona neSan Adrián del Besós.
Yadalwa ngo-2004 ngoyilo lwe UEliya Torres y UJose Antonio Martinez njengekomkhulu for IForam yeHlabathi yeNkcubeko eyayibanjwe ngaloo nyaka kwisixeko saseCatalan, kungoko igama layo. Kwaye nesona sakhiwo sayo sinophawu: iForam, umsebenzi we UJacques Herzog y Pierre deMeuron, ezihlala namhlanje Imyuziyam yeSayensi yeNdalo yaseBarcelona.
Eyona ndawo iphambili yendawo ilawulwa yiphaneli enkulu ye-photovoltaic, ezinye ii-pergolas ezibizwa ngokuba yiLos Pajaritos, ihlathi leentsika kunye neendawo ezininzi ezintle zokubamba imiboniso. Kodwa, ukongeza, inezinye iindawo ezimbini ezincinci: Ipaki yaseCampo de la Bota kunye neeAuditoriums.
IColon Square (eMadrid)
Imboniselo yePlaza de Colón, eMadrid, yenye yezona zikwere zinkulu eSpain
Incinci kuneyangaphambili, kodwa inomtsalane ngokulinganayo yile yesikwere saseMadrid esine-37 yeemitha zesikwere. Ifumaneka ekudibaneni kwezitrato zeGoya kunye neGénova kunye nePaseos de la Castellana kunye neRecoletos.
Ifumana igama layo kwizitiya kunye nesikhumbuzo ukuya UChristopher Columbus oko kuyayilawula. Oku kusabela kwisitayile se-neo-Gothic kwaye sakhiwa ekupheleni kwenkulungwane ye-XNUMX. Imele ubude bayo bubonke beemitha ezilishumi elinesixhenxe, nangona umfanekiso ngokwawo, umsebenzi we Jeronimo Sunol kwibhastile elimhlophe, imilinganiselo emithathu.
Ngokuphathelele abo bakhankanyiweyo IiGadi zokuFumana, ngaphantsi kwabo yiFernán Gómez Theatre Art Centre, iZiko leNkcubeko yangaphambili ye-Villa de Madrid. Sele uphezu kwawo, unokubona elinye ilitye lesikhumbuzo, elinikezelwe ngokuchanekileyo ekufumaneni iMelika, umsebenzi UJoaquin Vaquero Turcios. Kwaye neyona flegi inkulu yaseSpain emhlabeni, enendawo ezizikwemitha ezingama-294 ephakanyiswe kwipali engamashumi amahlanu.
Ekugqibeleni, ekudibaneni kwesikwere kunye nesitalato saseGénova zi Columbus Towers kwaye, ezinyaweni zayo, kwisiqithi, i-sculpture Woman ngesipili, yi-Colombian UFerdinand Botero.
Isikwere saseSpain (eMadrid)
IPlaza yaseSpain, eMadrid
Asiyishiyi ikomkhulu lelizwe lethu ukuze sikubonise enye yezona zikwere zikhulu eSpain eziphantse zafikelela kweyangaphambili, kuba ilinganisa i-36 yeemitha zesikwere. Izitrato iGran Vía, iPrincesa, iBailén, iFerraz, iLeganotos neCuesta de San Vicente zidibana kuyo.
Ijikelezwe zizakhiwo ezininzi ezinemifuziselo yesixeko. Yimeko ye Inqaba yaseMadrid, eyathi, nekhulu elinamashumi amane anesibini eemitha ukuphakama, yaba yenye yezakhiwo eziphakamileyo zokuqala kwikomkhulu, oko yakhiwa ngo-1960. Isakhiwo saseSpain, esekupheleni kweGran Vía.
Kodwa ukusebenza okungaphantsi kwezi kwaye ngokunyanisekileyo kubuhle ngakumbi Indlu yaseGallardo, ilitye elinqabileyo lemeko yanamhlanje ngu UKumkani uFederico Arias yagqitywa ngo-1914. Kwaye kufuneka singalibali ukwakhiwa kwe Inkampani yaseRoyal Asturian yeMigodi, obunye ubuhle be-alfonsine yesikhumbuzo okanye isimbo se-eclectic ukususela ekupheleni kwenkulungwane ye-XNUMX. Ekugqibeleni, isikhumbuzo Miguel de Cervantes ilawula iPlaza de España ukusuka kumbindi wayo. Yayingumsebenzi we URafael Martinez Zapatero kunye Lorenzo Coullaut Valera kwaye imele umbhali ohleli kunye noDon Quixote kunye noSancho bekhwele phantsi komzobo wakhe.
Isikwere saseSpain (eBarcelona)
IPlaza yaseSpain eBarcelona
Siyaqhubeka nokhenketho lwethu kwezona zikwere zikhulu eSpain kwi-homonymous enye yangaphambili ebekwe e-Barcelona. Kwi-34 square metres, incinci, kodwa ayintle kangako. Yayilwa ngabayili bezakhiwo UJosep Puig kunye neCadafalch y Guillem Busquets, nangona umntu ophetheyo ekuyigqibeni ebeya kuba njalo Antoni Darder.
Yakhelwe i UMboniso weZizwe ngezizwe ngowe-1929 njengofikelelo kwi UMontjuic, indawo ephambili yaloo mboniso. Enyanisweni, izikhumbuzo zelo xesha zisagciniwe, njenge Ilali yaseSpain okanye i-bullring endala, i-neo-Mudejar jewel of Ifonti kaAugustus namhlanje iguqulwe yaba yindawo yokuthenga, i Iinqaba zaseVenetian de Ramon Raventos okanye i-pavilion yaseJamani, ummangaliso woyilo lwangoku ngenxa UMies van der Rohe.
Ngokunjalo, embindini wesikwere kukho umthombo wesikhumbuzo owenziwe ngu Jose Maria Jujol kwaye zihonjiswe ngabakroli UMichael Blay y UMiquel kunye noLucia Osle. Ngeempawu zeklasikhi, imele umzekeliso wejografi kunye nembali yaseSpain ngokumelwa kweelwandle zayo, imilambo kunye nabalinganiswa abathile abadumileyo abanjengo. UTeresa oyiNgcwele kaYesu, UIsabel umKatolika o UJames I waseAragon.
IPlaza de Oriente (iMadrid), ingaphezulu kweyona ndawo inkulu eSpain
IRoyal Palace, kwiPlaza de Oriente
Ifumaneka kumbindi wekomkhulu laseSpain, imalunga nama-32 eemitha zesikwere. Ubume bayo buxande kunye ne-headboard egobileyo kwaye yayiyilwe ngu uNarciso Pascual kunye noColomer Ngo-1844. Kwakhona, mhlawumbi yeyona nto ibalulekileyo kuzo zonke esikubonise zona ukuza kuthi ga ngoku.
Ngenxa yokuba kwicala elingasentshona lisikelwe umda ngezinto ezinomtsalane Royal Palace, eyakhiwe ngomyalelo we UFilipu V ngenkulungwane ye-XNUMX kwiintsalela zeAlcázar endala. Kwangokunjalo, kwelasempumalanga uludwe lwesakhelo Iqonga laseRoyal, I-Madrid Coliseum ye-opera eyavulwa ngo-1850 kwaye, ukuya ngasentla, i IRoyal Monastery yokuzalwa, yasekwa yikumkanikazi UMargaret waseOstriya, umfazi kaPhilip II, ngenkulungwane ye-XNUMX.
Kodwa, ukongeza, iPlaza de Oriente igqame ngeegadi zayo ezintle. Singasathethi ke ezo zidalwe ngu UFrancesco Sabatini, ezingezizo zesikwere kodwa kwibhotwe, sikucebisa ukuba ubone iigadi ezisembindini, ye-invoyisi yebharoque, abo baseLepanto y abo baseCabo Noval, bonke kunye neentlobo zabo eziqingqiweyo eziqingqiweyo.
Phakathi kwezi kume isikhumbuzo sikaPhilip IV esenziwe ngu IPietro tacca, kodwa kunye nemifanekiso eqingqiweyo yookumkani baseSpain, esusela kwixesha leVisigoth ukuya UFerdinand I kaLeon. Ngokukwanjalo, kwiigadi zeCabo Noval unokubona ilitye lesikhumbuzo kweli joni lenziwe ngu UMariano benlliure kwaye kwezo zaseLepanto, enye kuMphathi uMelgar, umsebenzi we UJulio Gonzalez Pola.
IPlaza yaseSpain (Seville)
Plaza de España eSeville
Esi sikwere simiselweyo senzelwe i Ibero-American Exposition of 1929. Ifumaneka kwipaki yaseSeville kaMaría Luisa kwaye kungenxa yomyili wezakhiwo UAníbal González, owakha isithuba se-semi-elliptical se-31 square metres esakhiwe ngesakhiwo esimangalisayo esimalunga nekhulu elinamashumi asixhenxe eemitha.
Le fomu ifuzisela ukwamkelwa kweSpain kwiintlanga zase-Ibero-American. Ide ivuleleke kuMlambo iGuadalquivir njengendlela yokufikelela kwiLizwekazi elitsha. Ikwakhiwe ngesakhelo somlambo omncinci onesiqingatha sekhilomitha ewelwa ziibhulorho ezine.
Ngokubhekiselele kulwakhiwo oluphambili, luphendula kwisitayela se-classicist indlu yasepaladian. I-façade yayo inomhombiso omangalisayo we-ceramic kunye neegalari ezixhaswa zii-arches. Ezi zamva zikwanazo neesilingi ezihonjiswe kakuhle ngeesilingi ezenziwe ngamaplanga. Ekugqibeleni, eziphelweni zesakhiwo kuphakama iinqaba ezimbini ezimangalisayo ze-baroque ezingamashumi asixhenxe anesine eemitha ukuphakama, nangona inamasango amabini, i-Navarra kunye ne-Aragón.
Kwelinye icala, isikwere sinomthombo osembindini, umsebenzi we UVincent Traver kunye kunye iibhanki ezingamashumi amane anesibhozo emele amaphondo angamashumi amane anesithandathu asepeninsula kunye neCanary neBalearic archipelagos. Zicwangciswe ngokwealfabhethi kwaye kwibhentshi nganye kubonakala ingubo yayo yengalo, imephu yayo kunye nethayile yePisan kunye nesiganeko esifanelekileyo kwimbali yayo.
Usodolophu wePlaza waseMedina del Campo
ICawa yaseCollegiate yaseSan Antolín, kwi-Plaza Mayor yaseMedina del Campo
Ukuba sithetha ngemilinganiselo, ayiyi kuba yile yaseMedina del Campo ukuhlala kule ndawo phakathi kwezikwere ezinkulu eSpain. Kodwa sifuna ukuyifaka kuba yeyona inkulu phakathi kwezona zinkulu kwilizwe lethu, enendawo ezizikwemitha ezili-14 kwaye idlula, umzekelo, ezo zeSalamanca okanye iMadrid.
Waziwa ngayo Plaza Usodolophu wase la Hispanidad. Kwaye akukho nto imele ukubamonela ezi zangaphambili ngokwexabiso elikhulu. Kuba yakhiwe ngolwakhiwo olufana ne IHolo yaseKapa kunye Izindlu zeArcos kunye nePeso, bonke ukususela ngenkulungwane ye-XNUMX. Kodwa kwakhona Royal Palace, i kwizindlu zoonongendi zaseSan José naseSanta María Magdalena okanye Icawa yeCollegiate yaseSan Antolin.
Njengomdla wokwazi, siya kukuxelela ukuba iindlela zayo ezahlukeneyo zinamagama anje ngeFoal, iziqholo, ubucwebe okanye iArmory ngokwemibutho ethe yahlala kuzo ukuthengisa izinto zabo. Kwaye kukuba imvelaphi yayo isuka kwinkulungwane yeshumi elinesithathu, nangona ifom yangoku isemva. Kwimeko nayiphi na into, i-Plaza Mayor yaseMedina del Campo yenye yezona zindala kwilizwe lethu.
Ukuqukumbela, sikubonise i izikwere ezinkulu eSpain. Ngokungaphephekiyo, sibashiye benjalo abanye iNtsika yaseZaragoza, kunye ne-24 square metres, Inqaba ePamplona kunye ne-14 okanye eyakho Usodolophu wePlaza Madrid, nabangaphezu kwe-12 000. Ngaba akucingi ukuba ezi ndawo zintle njengoko zinomtsalane?
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba Zokuhamba » Iindawo ezibalekayo eYurophu » España » Izikwere ezinkulu eSpain